Sony na Panasonic na-arụ ọrụ na teknụzụ 8k iji kpọsaa egwuregwu Olympic ọzọ na Japan | Akụkọ akụrụngwa
Ọ gafeela otu izu kemgbe egwuregwu Olympic na Brazil kwụsịrị, anyị amalitelarị ikwu maka Egwuregwu Olimpik na-esote, ọ dịkarịa ala ruo na nkà na ụzụ. Onye mgbasa ozi ọha na eze NHK ka kwupụtara na ọ na-arụ ọrụ ịgbasa egwuregwu egwuregwu Olympic ọzọ a ga-eme na Japan n'afọ 202 na mma 8k, nke a makwaara dị ka Super Hi-Vision. N'oge na-adịghị anya mgbe ọkwa ahụ gasịrị, ndị nrụpụta Japan bụ Sony na Panasonic ekwuputala na ha na-arụ ọrụ ugbua iji malite igwe onyonyo na mkpebi 8k tupu emume egwuregwu Olympic ndị a.
N’egwuregwu Olympic ikpeazụ na Brazil, ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọha na eze NHK nọ na-agbasa ụfọdụ ule dị mkpa na 8k n’oge ule ahụ, mana ugbu a na ahịa anyị nwere ike ịchọta televishọn na-enye mkpịsị aka a na mkpịsị aka nke otu aka. Ugbu a Naanị Sharp na-ere naanị TV dị na ahịa na 8k mma, na ụdị ọ malitere na njedebe nke afọ gara aga na ọnụahịa nke $ 157.000. Na ego a, erere telivishọn ole na ole n'ụdị a mana n'oge egwuregwu gara aga, a hụla ha na ụlọ ọrụ dị iche iche na Japan, mgbe NHK na-agbasa na ogo kachasị nke ngwaọrụ a na-akwado.
Maka unu niile a na-enyo enyo n'okwu nke mkpebi, unu kwesịrị ịma na mkpebi 8k ji okpukpu anọ karịa ogo 4k dị adị nke na-aghọworị ezigbo ewu ewu n'ahịa, n'agbanyeghị na mgbasa ozi pere mpe dị mma. Mkpebi a n'ụzọ ezi uche dị na ya chọrọ bandwidth ugboro anọ karịa mkpebi 4k, bandwit nke adịworị elu. Sony na Panasonic ruru nkwekọrịta dị ka bipụtara na Japanese ngwaahịa mgbanwe na na-arụkọ ọrụ na onye mgbasa ozi ọha na eze NHK ga-azụlite teknụzụ dị mkpa, gụnyere igwefoto na ihe ndị ọzọ iji nwee ike ịnye egwuregwu Olympic niile na mkpebi 8k.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Sony na Panasonic na-arụ ọrụ na teknụzụ 8k iji kpọsaa egwuregwu Olympic ọzọ na Japan